Waa maxay Teknolojiyada dilid | Martech Zone
Waa maxay Teknolojiyada Dilka
Talaado, Janaayo 17, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kani waa muuqaal cajiiba oo cajiib ah oo ka socda Socialnomics iyo Eric Qualman, oo ah qoraaga Hogaamiyaha Dijital ah: 5 Fure Fudud ee Guusha iyo Saameynta. Waxaan ka reebay ereyga dilka. In kastoo shaqooyin badan lumiyeen xilliyadii hal-abuurnimada aadka u sarreysay, haddana shaki iigama jiro inay jiraan koror saafi ah oo ku saabsan shaqooyinka iyo fursadaha. Nasiib darrose, waxaannu leenahay xoogag siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo isku dayaya inay hor istaagaan isbeddelada halkii aan la qabsan lahayn. Fikradayda hoose, taasi waxay hoos u dhigeysaa horumarka guud ee hal-abuurnimada.
Si kastaba ha noqotee, waa fiidiyoow madadaalo leh oo codad heersare ah leh!
Tags: cilmiga bulshadafarsamada ayaa dili doontafiidiyow ayaa dilay duufaanta raadiyaha